Biyyi nuti itti baqanne nu hiraarse jedhu baqattoonni Paris keessaa -
Biyyi nuti itti baqanne nu hiraarse jedhu baqattoonni Paris keessaa
Baqattoonni laga meditraniyaan qaxxaamuruu dhaan gara Ferensayitti imalan rakkoo hamtuun isaan mudachuu dubbatu.
Mootummaan bakka jireenyaa waan nuu hin kennineef jecha daandii irra riqicha jala buluuf dirqamne jedhu .
Bakka isaan buufatanii jiran daandii irraa walitti qabuu dhaan magaalaa dhaa alatti geessee nu gate, achitti illee poolsiin faana nu dha’ee mirga keenyaaf ennaa iyyanutti nu reebee nu dararuu dhaan kaan immoo hidhaatti naqe jedhan. Guyyaa har’aas magaalaa Paris ala naannoo LASAPEL jedhamutti hiriira mormii geggeessanii jiru.
Bakka hiriira Sanatti kan argamee fi haala baqattoonni Paris itti jiran kan nuuf ibse dargaggoo Guutamaa Tadala ture. Tujuben paristti bilbiluun haasofsiistee jirti.
Previous “Araa dhabni taanaa maraa dhabamee, Tanaaf ar’a taane gabroota namaa”
Next Oromo Peaceful Protest in Washington D.C., Friday June 19, 2015